तपाईको यो साता कस्तो रहनेछ ? हेर्नु’होस् बैशाख २६ गतेदेखि ज्येष्ठ १ गतेसम्मको साप्ता’हिक राशि’फल : – Sadhaiko Khabar
तपाईको यो साता कस्तो रहनेछ ? हेर्नु’होस् बैशाख २६ गतेदेखि ज्येष्ठ १ गतेसम्मको साप्ता’हिक राशि’फल :
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २५, २०७८ समय: २०:१५:२३
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साताको प्रारम्भमा आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य स’मस्या आईपर्नेछ । देश परदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य स’मस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढि’लाईको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्च’को सम्भाबना रहेको छ । नयाँ लगानि गर्नका निम्ती बिशेष स’जग रहनु पर्ने समय रहेको छ । मगंलबारपश्चात भने कार्य क्षेत्रबाट आफन्तजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । सामान्य पारीवारिक झोर’झमेलाको साम’ना गर्नु पर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा हा’निको सम्भाबना रहेकोले सा’बधानी पूर्बक अघि बढ्नुहोला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । साताको अन्त्य’तिर भने सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त रहनेछ । कला कौलशताको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । यो साता आर्थिक क्षेत्रमा साबधानी रहनु होला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) यो साताको प्रारम्भमा पुरानो लगानी उठाउन समय उत्तम रहनेछ साथै नयाँ कार्यको थालनीले मन प्रशन्न रहला । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय राम्रो रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा जुट्नाले मानसम्मान प्राप्ती समेत रहनेछ । साझेदारी कार्यमा भने साब’धानी अपनाउनु पर्नेछ । मंगलबार पश्चात भने पारिवारिक स्वास्थमा खर्च बढ्नाले आर्थिक सङ्क’टको सा’मना गर्नु पर्नेछ । गरिरहेको कार्यमा समेत सम’स्या उत्पन्न हुनाले मनमा खि’न्नता बोध हुनेछ । मित्रजनहरुसँगको सम्बन्धमा सामान्य सम’स्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्राका क्रममा सामान्य चोट’पटकको सम्भाबना रहेकोले सज’ग रहनु होला । साताको अन्त्य’तिर भने स्थीर क्षेत्रमा गरिएको लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । पारिवारिक साथ सहयोगमा अ’धुरा कार्यहरु सम्पादनमा सहजता उत्पन्न हुनेछ । यो साता कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताको कदर हुनेछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) साताको प्रारम्भमा सामान्य अप्रि’य खबरले मन चि’न्तीत तुल्याउनेछ । गरिरहेको कार्य सम्पादनमा अधिक समय ब्यतति रहनेछ साथै कार्य सम्पादनको श्रेय समेत अन्य ब्यतिहरुले प्राप्त गर्नेछन् । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोग तथा खरिदको योग रहेको छ । मान्यजनहरुसँगको सम्बन्धमा सम’स्या देखापर्ने सम्भाबना रहेको छ । मगंलबार पश्चात भने नयाँ कार्यको थालनीले मन हर्षित रहनेछ । पुराना मित्रजनहरुको सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र दरि’लो बनाउन मद्दत पुग्नेछ । पठनपाठनमा लगाईएको समय महत्वपुर्ण रहनेछ । बिद्वत बर्गहरुसँग समय बिताउने अवसर प्राप्त रहनेछ । आफुभन्दा साना सँग मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । साताको अन्त्यतिर अना’वश्यक खर्चका कारण तात्कालिन आर्थिक अभा’बको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रतिश्पर्धा’जन्य कार्यमा साब’धानी अपनाउनु नै राम्रो रहनेछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) यात्राकारक समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती अधिक समय ब्यतित रहनेछ । कामकाजका क्षेत्रमा सामान्य सङ्घ’र्षका बाव’जुद पदोन्नतीको सम्भाबना रहनेछ । मुद्दा’मामिलामा फस्नु’परेता पनि वि’जय आफ्नै हुनेछ । पुरानो लगानि उठाउन भने समय मध्यम रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । भुमि तथा बाहन सुख प्राप्त रहनेछ । पारिवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । सबारीसाधनको प्रयोगमा साब’धानी अपनाउनु पर्नेछ । साताको अन्त्य’तिर आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन नयाँ कार्यको थालनिको योग रहेको छ । अध्ययन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । यो साता कार्यप्रति लगनशिल रही निकै लाभ प्राप्त रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) यो साताको प्रारम्भमा स्वास्थमा सामान्य स’मस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नजिकका मित्रजनहरु बाट धो’का हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । गरिरहेको कार्य परिर्वतनको योग रहेकोछ साथै संचित रकम खर्च हुने सम्भाबना रहेको छ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबलम्बन नगर्नाले सम्पादित कार्यहरु अपू’र्ण रहनेछन् । मित्रजनहरुको अधिक सामीप्यता अहित साबित हुनेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यतिहरुले सहजता पूर्णढंगमा प्राप्त गर्नाले कार्य प्रति शारिरीक आल’स्यता छाउनेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको समय रहेको छ । साताको अन्त्य’तिर गरिरहेको कार्यका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्त’ता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य अप्रि’य खबरले मन चिन्ती’त गराउन सक्नेछ । यो साता अरुको बिश्वासमा नप’री कार्य सन्चालन गर्नु उत्तम रहेनछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) ब्यापार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती पारिवारिक साथ सहयोग उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य ति’क्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारीरिक आलस्य’ताका कारण गरीरहेको कार्यमा ढिला’ईको योग रहेनछ । स्थान परिर्वतनको सम्भाबना समेत रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य सम’स्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । हरकसैको पुर्ण बिश्वास गर्नाले कार्य सम्पादनमा सामान्य स’मस्या देखा पर्नेछ । बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य सम’स्या देखा पर्नेछ । साताको अन्त्यतिर मित्रजनहरु सगँको सहकार्यमा नयाँ कार्यको थालनि भएतापनि त्यसको प्रतिफल भने त्यति उत्तम प्राप्त हुने छैन । सामान्य यात्रा पश्चात मान्यजनहरु सगँ भेटहुनेछ साथै आम्दानीका श्रोत स’बल तुल्याउने उपाय समेत प्राप्त रहनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) साताको प्रारम्भमा रोकिएर रहेको कार्यहरु सुचारु गर्नाले उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा जुट्नाले उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । प्रतिश्पर्धा’जन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहेन योग रहेको छ । देश प्रदेशको यात्राको योग रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा नयाँ लगानि उत्तम रहनेछ । सभासम्मेलनमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । दाम्पत्यसम्बन्धमा रहेको उतार’चढाब कम भई सुधार रहनेछ । पारिवारिक साथ सहयोग द्वारा अ’धुरा कार्यहरु सम्पादित गर्न समय उत्तम रहेनछ । साताको अन्त्यतिर भने नजिकका मित्रजनहरुले धो’का दिनाले गरिरहेको कार्यमा ढिला’ईको सम्भाबना रहनेछ । सामान्य चोटपटको साम’ना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानी अपनाउनु पर्नेछ । यो साताको अन्त्यतिर नयाँ कार्यको थालनि न’गर्नु उत्तम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) अध्ययन अध्यापनका निम्ती उत्तम समय रहेको छ । रचनात्मक कार्यको क्षेत्रबाट बौद्धिक ब्यत्तित्वहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । आफुभन्दा साना हरुसँग मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नाले मन हर्षित रहने छ । शुभचिन्तकहरुको साथसहयोगमा ज’टिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । परीवारका सदस्यहरुबाट टा’ढा भएको महसुस रहनेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा भने सामान्य घा’टाको सामना गर्नुपर्ने समय रहेको छ । साताको अन्त्यतिर शारि’रीक आलस्य’ताका कारण कार्य सम्पादनमा बिल’म्व रहनेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सामान्य ति’क्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने प्रगाढता छाउनेछ । योसाता आफ्नो कला कौशलका माध्यमबाट आम्दानी मजबुत बनाउने समय रहेको छ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) पारीवारिक मनोरञ्जनका निम्ती समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक श्रोतसाधन खरिद गर्ने बिशेष समय रहेको छ । सभासम्मेलन’जन्य कार्यमा सहभागिताको योग बन्नेछ । मान्यजनहरुको स्वास्थका क्षेत्रमा भने सामान्य स’मस्या देखा पर्ने सम्भाबना रहेको छ । कलाकौशलको प्रयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु सबल तुल्याउन सकिने योग रहेको छ । अध्यन अध्यापनका निम्ती निकै राम्रो समय रहेको छ । नयाँकार्यको थालनि पछिको आम्दानिको श्रोत बन्नेछ । पुराना मित्रजनहरुसगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । साताको अन्त्यतिर देशबिदेशको यात्राको योग रहेको छ । अधुरा कार्यहरु सम्पादन गर्न समयले साथ दिनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ । यो साता पारीवारका निम्ती खर्चि’एको समय उत्तम रहनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) साताको प्रारम्भ उत्तम रहनेछ मित्रजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । अ’धुरा कार्यहरु सहजतापूर्ण ढगंमा सम्पादित रहनेछन् । मनोरञ्जनमुलक यात्राको योग रहेनछ । बल तथा पराक्र’ममा बृद्धि हुनेछ । सामान्य अह’मताले कार्य क्षेत्रमा एक्लो’पन तुल्याउनेछ । पारिवारिक झोरझ’मेलाको साम’ना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा सा’बधानि अपनाउनु होला । स्थीर क्षेत्रमा लगानि लगाउने समय रहको छ । कार्यक्षेत्रमा लगन’शिलताका कारण मान्यजनहरुलाइ प्रशन्न बनाउन सकिनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको अवसर प्राप्त रहनेछ । समय उत्तम रहनेछ । आम्दानीका श्रोतहरु सामान्य परिर्वतनको सम्भाबना रहेको छ । योसाता मनमा घम’ण्डलाइ उत्पन्न हुन नदिनु होला ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) बाणीका कारण आफन्तजनहरुसँगको सम्बन्धमा सामान्य सम’स्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगाईएको लगानिको प्रतिफल प्राप्त गर्न केहि समय पर्खनु पर्नेछ । भोजभतेरजन्य कार्यहरुमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा ज’टिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । मनोरञ्जनमुलक यात्राको योग रहनेछ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबल’म्बन गर्नाले दिर्घका’लिन आम्दानीका श्रोतहरु फेला पर्नेछन् । कार्य सम्पादनको श्रेय अन्य ब्यतिहरुले प्राप्त गर्नाले शारिरीक आल’स्यता उत्पन्न हुनेछ । साताको अन्त्यतिर पारीवारिक झोरझ’मेलाको सा’मना गर्नु पर्नेछ । मानसम्मानामा आँ’च आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले गरिरहेको कार्यका क्षेत्रमा साब’धानि अपनाउनु होला । यो साता साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधुरा’कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम रहने छ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) पारिवारीक साथ सहयोगद्वारा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा उत्तम समय रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताका कारण आफन्तजनहरुको मन जित्न सकिने छ । अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । प्रेमसम्बन्धमा प्रगाढता छाउने समय रहेको छ । मगंलबार पश्चात भने स्वास्थमा सामान्य सम’स्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु सँगको सम्बन्धमा सामान्य ति’क्तता उत्पन्न हुने सम्भाबना रहेको छ । अरुको बिश्वासमा कुनैपनि कार्य नसु’म्पिनु होला अन्यथा ब्यवहारिक झन्झ’टमा फसि’ने सम्भाबना रहेको छ । साताको अन्त्यतिर साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधु’रा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । मान्यजनहरुसँग सामान्य मन’मुटाबको सम्भाबना रहनेछ । योसाता नयाँ लगानिमा बि’शेष ध्या’न पुर्याउनु होला ।